Hamafisina sy hatsaraina ny fomba fitantanana sy ny paik’ady iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, na KERE, any amin’ny faritra atsimon’ny nosy. Samy manana ny andraikiny avy ireo sampan-draharaham-panjakana na koa ireo tsy miankina amin’izao ady amin’ny KERE izao.
Ho an’ny MPTDN, dia ny fampiasana ny nomerika sy ny teknolojia vaovao hivoahana amin’ny fianjadian’ny KERE no andraikitrany voalohany indrindra.
Mifanandrify amin’izany dia natsangan’ny fitondram-panjakana , amin’ny alalan’ny MPTDN ny « Logiciel » « KEREDATA » . Izay ho ampiasain’ireo vondron-kery manokana «PLATEFORME DE GESTION ET TRAITEMENT D’INFIORMATION» ao anatin’ny CENTRE DE COORDINATION OPERATIONNEL-KERE .
🟧𝑭𝒂𝒏𝒂𝒎𝒐𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂𝒊𝒔𝒂𝒏𝒂 𝒇𝒂𝒏𝒂𝒑𝒂𝒉𝒂𝒏-𝒌𝒆𝒗𝒊𝒕𝒓𝒂
Tanjona ny ahafahana manangona ireo ita sy « renseignements » mazava sy azo ampiasaina mba handrindrana ireo fanampiana tokony omena ny isan-tokantrano, ny fitsaboana tokony ho arahin’izy ireo, ny famaritana ny tahan’ny fahafahana misitraka rano fisotro amin’ireo kaominina maro .
Raha fehezina, dia nampidirina ao anatin’ny paik’ady hamongorana ny KERE ny teknolojia vaovao mba hanafainganana ny fandraisana fanapahan-kevitra sy hamaritana malaky ny fepetra tokony ho raisina.
🟧 𝙄𝙧𝙚𝙤 𝙩𝙚𝙗𝙤𝙠𝙖 𝙡𝙚𝙝𝙞𝙗𝙚 𝙖𝙤 𝙖𝙢𝙞𝙣’𝙣𝙮 𝙆𝙀𝙍𝙀𝘿𝘼𝙏𝘼
✅ Ny mombamomba ireo tokantrano isaky ny fokontany, ny foto-piveloman’izy ireo,
✅ Ny fanampiana sy tosika efa noraisiny (raha efa nisy),
✅ Ny toe-pahasalaman’ny isan’ankohonana,
✅ Ny fisy fanaraha-maso ny fitsaboana ireo mararin’ny tsy fanjarian-tsakafo (MAS : Malnutrition Alimentaire Sévère) ; ireo no teboka lehibe mandrafitra ny KEREDATA.
🟠 Fa indrindra, ny KEREDATA dia ahafahana mamaritra ireo toerana ahitana taha ambony amin’ny olona lasibatry ny KERE, ireo isan’ny namoy aina, ireo manaraka fitsaboana sy tohana ara-tsakafo, ireo tokony ho araha-maso akaiky .
Nidina taty Amboasary ny Minisitry ny MPTDN sy ireo mpiara-miasa aminy nanomboka ny fampandehanana ny « logiciel », ka nitsidika ireo ivo-toerana fanaraha-maso ireo mararin’ny KERE (CRENAS, CRENI, CRENAM) mba ahafahana mijery ifotiny ny lamina entina ampiodinana avy hatrany ny logiciel.
𝘈𝘰𝘳𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘬𝘦𝘭𝘺, 𝘔𝘢𝘥𝘢𝘨𝘢𝘴𝘪𝘬𝘢𝘳𝘢 𝘮𝘪𝘷𝘰𝘢𝘬𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢𝘬𝘢 𝘢𝘮𝘪𝘯’𝘯𝘺 𝘒𝘌𝘙𝘌 𝘯𝘰 𝘧𝘢𝘯𝘢𝘮𝘣𝘺.